JINGHPAW KASA: ဗမာအစိုးရ တပ်စခန်း ကေအိုင်အေ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်
ဗမာအစိုးရ တပ်စခန်း ကေအိုင်အေ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်
ဒီဇင်ဘာ (၁၁) အင်္ဂါ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ မြောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၁) လက်အောက်၊ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃၃) နယ်မြေဖြစ်သော ပန်ဝါဒေသ ကချင်ပြည်နှင့် တရုတ်ပြည် နယ်ခြားမှတ်တိုင် (၆) အနီး ဗမာအစိုးရ စစ်တပ် တပ်စွဲထားသော အူရားကောင် တပ်စခန်း ကို ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များမှ ဒီဇင်ဘာ (၁၀) ရက် မနက် (၆း၃၀) နာရီခန့် အချိန်တွင် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ အူရားကောင်း ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်ကို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ရာ ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော် (၃) ဦး တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအတွက် အသက်စွန့်သွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤ အူရားကောင်း စခန်းသည် လွန်ခဲ့သော သြဂုတ်လ (၁၄) ရက်နေ့တွင် ဗမာစစ်တပ်မှ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ပြီး သိမ်းယူသွားသော ကေအိုင်အေတပ်စခန်း ဖြစ်ပြီး ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်များဖြစ်သော ခလရ (၇၇)၊ ခလရ (၂၆၀)၊ ခလရ (၁၃) တို့ တပ်စွဲနေရာယူထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ယခုအချိန်ထိ တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်လျက်ရှိကြောင်း ဆက်လက်သိရှိရပါသည်။ တိုက်ပွဲတွင် ဗမာအစိုးရ စစ်သားအများ အပြား သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရရှိပြီး ဆုတ်ခွါ သွားကြောင်းနှင့် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်၏ လက်နက်၊ ရိက္ခာ အမြောက်အမြားကိုလည်း ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များ သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
KIA (33) battalion patriotic soldiers succeed to U Ra Kawng post, it is near Kachin State and China boundary No. (6), at 6:30 AM on 10th December according to the KIA front-line officer report. In that battle, (3) KIA patriotic soldiers gave their life for the Kachin fore father land. Actually, this U Ra Kawng post has been occupied by Burmese Government troops with firing heavy artillery weapons last 14th August from the KIA. And, Burmese infantry unit (77), (260) and (13) settled in that post. The battle is still going on until now and many Burmese soldiers were injured and died and left the post. Thus, KIA has gotalot of Burmese Government soldiers’ weapons and rations from that battle.
bai zing la lu sai nga ai majaw grai kabu sai . myu tsaw hpyen la (3) hpe mung hkungga jaw ai law
SHARE SHAGAN ni yawng hpe hkung ga jaw dat ai, MAJANaMADU KARAI KASANG kaw kyu hpyi ap nawng let, matut gasat ding yang di ga,ntara ai ni hkrat sum chyalu sha rai nga ai mungkan re,ANHTE yawng mung ,MUNGKAN SHARA magup kaw nna shani shana lam shagu hpe dang di lu ai KARAI WA kaw kyu hpyi ya nga ga ai yaw.
Karaiachyeju hpe shakawn dat ai, karai kasang bungli galaw nga ai lam hpe dan dan dawng dawng mu lu nga sai, chyeju kaba karai kasang e....
tsit tsawm bum said...
hkrat sum asak ap nawng mat sai myu tsaw share shagan(3) hpe hkung ga jaw dat nngai, karai wa shi a' mung dan de woi wa uga!
Mungdan hte Mungdan sha niamatu asak up nawng mat wa sai share shagan (3) hpe hkungga jaw dat nngai law. Matut nna mung asak up nawng lai mat wa sai ni hte hkala nba hkrup ai ni yawng hpe Karai Kasang tutebau sin nga na sai ngu kam ai.
Myu tsaw hpyen la hpu nau ni(3) hpe hkungga jaw dat ailaw.Anhte ni mungdan lu na nau nna sai hpe ngai kam ai.Yawng ni tinang seng ang ai magam bungli ni hta shakut shaja nga ga.Mungdan langai gaw gap na hta atsam nga ai mung masha ni grai ra ai n rai ni.
Right now,we have an information that,Burmese military post URA KAWNG RECENTLY LOST to KIA FORCE is being attacked by the burmese force, using both CHINA GROUND TERRITORY as well as AIR SPACE allowed by the CHINESE GOVERNMENT, so that burmese helicopter gunships could be participated in this assault.CHINA,ONE of the SUPERPOWER always mentions not to intervene OTHER COUNTRIES INTERNAL AFFAIRS is now doing the CUNNING,CROOKED BRUTALITY as their NAME in burmese TAYOKE means CROOKED,CUNNING and SELFISH.
အတဲ့ ကချင် တွေ အ သေ ခံကြ
များ များ တိုက် များ များ သေ မှာဘဲမင်းတို့ ခေါင်းဆောင်တွေက ကျည် မကျ တဲ့ နေ ရာမှာ နေပြီး မင်းတို့ ကို အသေ ခံခိုင်းနေတာ ကိုယ် ပိုင် စီးပွါးရေးတွေနဲ့ ဘောစီတွေလေ။ ရွှေလီ နေခေါင်းဆောင် တွေ ကို မပြောနဲ့ သာမန် ဆလန်ကဘာ တောင် သိန်းသောင်း ချီ တဲ့ အိမ်တွေ ဝယ်ပြီး ကချင် လူမျိုးစု ရဲ့ ငွေ တွေ အလွှဲ သုံးစား နေကြတာ
ဘုမသိဘမသိ ၈တန်း ၉တန်းကလေး တွေ စုဆောင်းရေး ဆွဲ လူမျိုးရေးစိတ် ဓါတ်တွေ တွေ ရိုက်သွင်း အသေခံ ခိုင်း kia တစ်ယောက်က အစိုးရ စစ်သား ၁၀ ယောက်နှုန်းနဲ့ သတ်နိုင်တာတောင် kia ဘဲ ကုန်သွား မယ် အစိုးရ စစ်သား မကုန်သေးဘူး ခေါင်းဆောင်တွေ ပိုချမ်းသာဖို့
သွေးထွက် အောင် မှန် တယ် ဘော် တာရေ။
အိမ် မက် လား?Brothers